Kaominina Toamasina: nifanebaka ny ekipan’ny PDS sy Ratsiraka Roland | NewsMada
Kaominina Toamasina: nifanebaka ny ekipan’ny PDS sy Ratsiraka Roland
Nivahiny tao amin’ny haino aman-jery tsy miankina eto Toamasina ny depiote sady kandidà ben’ny Tanàna, Ratsiraka Roland, ny alahady teo.
Anisan’ny ambetin-dresany ny filazany fa nofidim-bahoaka ny tenany sy ny lisitra mpanolotsaina miaraka aminy. “Antony hitakinay ny hanaovana fampitahana ny fitanana an-tsoratra (PV) sy ny vatom-pifidianana izany. Mbola matoky ahy ny vahoakan’ i Toamasina. Avy amiko ny nahazoana ny fanazavana ny Tanàna. Teo koa ny
nampahomby ny fanadiovana ny tanàna sy ny tsy nahitana fako mivangongo mihitsy“, hoy izy. Mitarika amin’ny fahazoana isam-bato ny mpanolotsaina miaraka aminy raha laharana faharoa aorian’ny kandidàn’ny IRK, Nantenaina kosa izy eo amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna. Tsy niandry ela ny valin-kafatry ny kabinetran’ny PDS, omaly, ary namory mpanao gazety. Nambaran’izy ireo fa tsy hisy hiasa hiaraka amin’ny Jirama raha tsy ny fanjakana ihany. “Tsy afaka hanao izany fametrahana takamoa amin’ny fahazavana amin’ny arabe izany Ratsiraka Roland, raha tsy misy fahazoan-dalana amin’ny kaominina ihany.
Hadinony fa anisan’ny nanenjehan’ny Fitsarana azy, ny taona 2007 ny fahalotoan’ny tanàna sy ny fanodinkodinana volam-panjakana“, hoy ny avy amin’ny PDS, notarihin’ny tale kabinetrany.
Ankoatra izany, hita taratra ny tsy fahaiza-mitantana eo anivon’ny kaominina, amin’ izao faramparan’ny fitantanana izao. Mbola tsy nisy sahy nametraka dokam-barotra teo amin’ny araben’ny Fahaleovantena raha tsy amin’ny fitantanan’ny PDS izao. Tahaka izany koa ny dabam-pako. Efa niakatra eny amin’ny araben’ny Fahaleovantena kanefa nasiana soratra hoe “Tsy azo anariana fako”.